रित्तियो सगरमाथा आधार शिविर ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
रित्तियो सगरमाथा आधार शिविर !
जेठ १७, २०७६ शुक्रबार १८:२४:२७ | भाेजेन्द्र बस्नेत
काठमाण्डौ – यस वर्षका लागि हिमाल आरोहणको पहिलो याम सकिएसँगै सगरमाथा आधार शिविर सुनसान बनेको छ ।
आरोही तथा उनीहरुका सहयोगीहरु फर्किएपछि आधार शिविर सुनसान बनेको हो । आधार शिविरबाट सबै आरोहण दलका सदस्य तथा सहयोगी र व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीहरु फर्किएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) का उपाध्यक्ष लामाकाजी शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।
एसपीसीसीका केही कर्मचारी अन्तिम व्यवस्थापनको काम गरिरहेकाले आगामी सोमबारदेखि आधार शिविर मानवशून्य हुने शेर्पाले बताउनुभयो । एसपीसीसीले सगरमाथाको दोश्रो शिविरसम्म बाटो बनाउने, सरसफाइ तथा अन्य समन्वयको काम गर्दै आएको छ । सगरमाथा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने आरोहीहरुको नाम्चेमा अन्तिम लगत राख्ने काम पनि एसपीसीसीले गर्छ ।
हिमाल आरोहणको मुख्य याम चैतको दोस्रो हप्तादेखि जेठको दोस्रो हप्तासम्म झण्डै दुई हजार मानिसको बसाइ रहेको आधार शिविर अहिले खाली भैसकेको हो । सगरमाथा, ल्होत्से तथा नुप्त्से हिमाल आरोहण गर्न गएकाहरु सगरमाथाकै आधार शिविरमा बसेर तयारी गर्छन् । आरोहीहरुले झण्डै ४५ दिन आधार शिविरमा बिताउने भएकोले त्यो अवधिमा आधार शिविर पालहरुको सहर जस्तै हुन्छ ।
वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्न आउने आरोहीले मे २९ भित्र आरोहण गरिसक्नुपर्ने र जुन १ भित्र आधार शिविर खाली गरिसक्नुपर्ने सरकारी नियम छ । धेरैजसो आरोही जेठको १४÷१५ गते नै फर्किएका थिए ।
यस वर्षको सगरमाथा आरोहण गएको १३ गते सकिएको हो । यो याममा सगरमाथा आरोहणका लागि ४४ वटा समूहका ३ सय ८१ जनाले अनुमति लिएका थिए । उनीहरुले आरोहण गरेको प्रमाणसहित दर्ता गर्ने काम भैरहेकोले कतिले सफल आरोहण गरे भन्ने यकिन तथ्याङक आउन केही दिन लाग्ने पर्यटन विभागकी निर्देशक मिरा आचार्यले बताउनुभयो ।
यस वर्षको आरोहण उत्साहजनक रहेको पर्यटन व्यवसाय समेत रहेका एसपीसीसीका उपाध्यक्ष लामाकाजी शेर्पाले बताउनुभयो । भारतमा आएको ‘फणी’ नामको आँधीको प्रभावका कारण दुई दिन त्रास बढाएको भए पनि बाँकी समय सामान्यतया मौसमले साथ दिएको र आरोहीहरु उत्साहित बनेको शेर्पाको भनाइ छ ।